Ziziphi iintlobo zomoya womntwana?
Qonda ukuba zeziphi iimpawu zengqondo zomntwana zifana-ngoko uya kukwazi ukuqonda kakuhle ngakumbi. Ngokuqinisekileyo, uloko uqaphela indlela abantwana abaziphatha ngayo ngokuhlukileyo, ngokuqala ngokuzalwa: omnye karapuz uhlala ngokuzihlalisa esitulo sabakhubazekile aze alinde ngokugqithiseleyo yonke into ukujikeleza, kunye nolunye uhlangothi, kungakhathaliseki ukuba unamathela njani iibhande zakho zokuhlala, uyazama 'ukuza' ukusuka "kwidleke". Kwaye kutheni? Ewe, kuba umlingiswa, ngokuchanekileyo, uhlobo lomoya. Umntwana uzalwe ngesimo esizuze ilifa, elibonakaliswa ebuntwaneni buntwaneni kwaye ikhetha ukuziphatha komntwana, indlela yokunxibelelana, ukhetho kwiimidlalo, iimpawu zobomi bemoya. Iingcali zengqondo zihlukanisa ezine iintlobo zesimo: i-choleric, i-melancholic, i-sanguine, i-phlegmatic. Nangona kunjalo, abantu abanesimo "esicocekileyo" abanqabile. Ziziphi iintlobo zomoya womntwana? Ngokuqhelekileyo kukho iintlobo ezidibeneyo.
Olu hlobo lwesimo silula ukufunda kwi-diaper. Abantwana abanjalo banokuchitha iiyure bazama ukufumana oko bakufunayo ngokumemeza, bangene kumahlazo ngenxa yezinto ezincinci: kungekhona ngexesha lokutshintsha i-diaper okanye umdlalo odlala kude. Bathukuthela ngakumbi kunabantwana abanamanye amaqondo, angabonakali. Kwaye bazincama kuphela kumama kwiiphatha. Ezi ntsana zinamandla kakhulu. Ukunyakaza kwabo kudla ngokukhawuleza kwaye kukhawuleza, kwaye iimvakalelo zomelele kwaye zivakaliswe.
- umsebenzi ukhawuleza ukwenza, kungekhona ukuphulaphula ukuphela, yonke into ihamba ngokukhawuleza, kodwa ingakhathali, ingaqapheli ukungalungi kunye neeposiso;
ukuzithemba ngokweqile, ukuxhomekeka komngcipheko kunye nezenzo zokukhawuleza kunokuqhubela phambili "ukudweba" iindibano ezingathandekiyo.
1. Dlala nomntwana, yenza ubuchule bakho, funda. Tshintsha ingqalelo kwenzo enye ukuya kwenye. Ukubumba kunye nokudweba - yiyo kanye into oyifunayo i-karapuza ene-fucked.
2. Qiniseka ukuza kunye neendlela zakho zokulala, eziza kuphinda ziphindwe rhoqo imihla. Ngokuhlwa, izinto ezingaphandle zingabandakanywa: umculo omculo, iimpawu zokuzonwabisa, imidlalo yebhola. Funda le ncwadi kwintsana.
3. Ngaba ufuna ukufundisa umntwana ukuba afake icala? Unomonde okwaneleyo. Okokuqala, i-crumb ifanele ibe nomdla kwisiphumo sokugqibela, ngoko uthabathe iintlobo ezahlukeneyo zokukhuthaza. Futhi khumbula ukuba imizuzu eyi-15 yeeklasi kuye - ngonaphakade.
Abantu abancinci be-choleric banomdla kakhulu ukugxeka. Ukwenza izimvo kwiintsana kubalulekile, kodwa kuthulile. Ukumemeza kunye nokuhlwaywa, kwaye nangona kunjalo udlame lomzimba, lunokutshabalalisa ulwalamano lwakho. Uhlobo luni lomntwana?
Ingane inemvakalelo kakhulu kwaye iyakhathazeka. Uthanda indawo ezintsha, abantu abatsha. Ngokutsho kwamaqhekeza, kulula ukucacisa isimo sakhe sengqondo, isimo sengqondo kwihlabathi. Ngomntwana onjalo, abazali bahlala belula. Ngokukhawuleza ulele elele aze avuke kalula. Ufuna wonke umntu athande. Yilungiselele ukuba ikusasa lakho liya kugcwaliswa kunye nabahlobo bakho karapuza. I-Sanguine isetyenziswe ngokulula kwiimeko eziguqukayo kwaye ngokuqhelekileyo iya kwi-kindergarten ngokuzithandela. Mhlobo. Unomdla.
- I-Sanguine iwa phantsi lula phantsi kweempembelelo ezintle nezimbi.
1. Ukususela esemncinci, jonga umntwana kwaye ngenyameko, kodwa ngokuqhubekayo uzijwayele ukuba ubulungisa. Khumbula: i-ill-bred sanguine kalula ibe ngumqambimanga. I-Sanguines yinto eqhelekileyo, idla ngokufuna amathoyizi amasha kunye nokutshintsha phantse imihla ngemihla.
2. Umntu omncinci wesondlo uyazithemba ukuzithemba kwakhe ngoko ke kufuneka ukuba adunyiswe kuphela. Ukudumisa rhoqo "phambili" kunokuchaphazela ubuntu obusakhulayo.
Ukhawuleza ulala ngokulala, uvuke, ulala ngokuthula. Udlala nemidlalo yamathandwayo, ayithandi ukuqhuba kunye nengxolo, kodwa uthanda ukutya nokulala.
Izigulane ze-Phlegmatic zihlala zinengxaki kwi-kindergarten, apho kufuneka ukuba zizalisekise ngokukhawuleza iimfuno nemisebenzi yootitshala.
1. I-Phlegmatic ayilula ukuhamba kunye neqela lezingane. Ngokuqhelekileyo ahambe kunye naye kwindawo yokudlala, ukuze ahlanganiswe kumdlalo jikelele.
2. Kunzima kumntwana ukuba agcine ulawulo lomhla. Ngamandla akho ukufundisa i-crumb ukuba "uzive" ixesha. Yiba nesineke kwaye ukhumbule: akukho mzekelo kufuneka ulungele umntwana!
3. Abagadi be-Phlegmaticians batshintsha ingqalelo ngokukhawuleza, ngoko kunzima ukuba balandele, umzekelo, oko utitshala athethayo. Ukuncedisa i-crumb, yakha imeko apho angaziva ephumelele khona.
Uhlobo luni lomntwana? Ingane ithule ngokwaneleyo, iyalungelelaniswa, kwaye iphendule kakhulu kwaye inokholo. Uthobekile kwaye unamahloni, kwiqela lezingane, uphantse angabonakali. Iimvuthu ezinjalo zikhetha ukudlala yedwa okanye ngomntwana oqhelekileyo. Nangona kunjalo, emva kokuzola kwabo kwangaphandle kukho ulwandle lweemvakalelo kunye namava. Inkathazo encinci ingabangela iintlanzi.
1.Umntwana unengqondo ephilileyo. Musa ukumemeza, ukugxeka okanye ukugxeka into ekhoyo: sele sele eneentloni. Kwanele ukuchazela encinci ithoni ephumlileyo, into ephosakeleyo kuye nangokwenziwe oko.
2. Udumiso, ukukhuthazwa, inkxaso, ukunxibelelana okuthandanayo (ukuqabana, ukuxubusha), nokuba kube yimpumelelo encinci - kunye nekarapuz yakho iya kuguqula iintaba. Khumbula ukuba ukuzithemba kwe-melancholic, njengowomthetho, wenziwe phantsi. Khumbula: indumiso isoloko iphakamisa ukuzithemba, kwaye igxeke phantsi.
3. Ukuba uqala umdlalo kunye nebhokhwe, qalisa ukunika kuye ukuze aphile kwimeko yobunkokeli, avuyiswe kuyo aze amfune.
Abantu abane-melancholic bathatha yonke into ecaleni kakhulu entliziyweni yabo, bakhathazeke kakhulu. Ulibale amabali adizayo. Kungcono ukuxelela amabali omntwana alawulwa yingqondo, ububele, ukuhlaziya.
Indlela zoMbhali zophuhliso lwabantwana bokuqala
Ukukhuliswa kwabantwana kwiminyaka emithandathu
Indlela yokufundisa umntwana ukuba alele egumbini lakhe
Umntwana wesibini kwintsapho, iingxaki zokucwangcisa
Indlela yokuphuhlisa umntwana ngaphambi konyaka ekhaya
Ukubaluleka kwemidlalo yabantwana basenkulisa
Ndiyayithiya indoda yam, yintoni endiyenzayo?
I-anyi pie nomvundla
Ukungcoliswa kwamanzi kunye nezindlela zokuwunqoba
Ukhuphiswano lwequmrhu kwimeko
Yenziwe: UAnastasia Volochkova ubonise konke, ifoto
Izipikili eziphilileyo kunye ne-manicure ephathekayo kunye neelisi zokwakha i-LCN
Iibhati zokuqinisa izipikili
Indlela yokukhulisa i-tulips ekhaya
Makeup Makeup Makeup Tips
UJulia Kovalchuk: i-Biography
I-pie e-spicy ne-rhubarb
Indlela yokwandisa imilomo yezonyango zabantu